कसरी विभाजनको मार खेप्दै एमाले ?
नेपालदृष्टि । विधि र विधानको अधिनस्थ हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिवादी बनाएपछिको परिणाम नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ ।
देश भर जारी मतगणना तथा आएका मतपरिणाममा एमालेले ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जोगाउन नसकेको देखिन्छ ।
एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेपछि एमालेलाई देशैभर क्षति पुगेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लैले बहुमत ल्याउने घोषणा गरेका ओलीले मतगणना जारी हुँदैगर्दा अस्ती आइतबार धाँधली भएको हाँस्यास्पद विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
निर्वाचनअघि नै क्षतिको पूर्वानुमान गर्दै घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूले वामपन्थी गठबन्धनको कुरा उठाएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘फजुल कुरा गरेर समय बर्बाद नगरौं’ भन्दै भुसालहरूका कुरालाई वेवास्ता गरेका थिए । अहिले परिणामले एमाले क्रमशः सकिँदै–सकिँदै जाँदा अध्यक्ष ओलीको मुख बन्द छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितका नेताहरुले विभाजनको असरले पार्टी पराजयको शिकार भएको स्वीकार गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको छैन । तर, ती ठाउँमा पनि एमालेलाई क्षति पुगिरहेको छ । पार्टीमा छाएको निराशाबीच निर्वाचन झेल्नुपर्ने, त्यसमाथि पार्टीका योग्य र इमान्दार नेता–कार्यकर्ता पार्टी बाहिर रहेका कारण एमालेले यस्तो दुर्गती व्यहोर्नुपरेको नेताहरु बताउँछन् ।
पूर्वमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटामा एमाले पराजित भएको छ । पूर्वबाटै एमालेले विरासत गुमाउने क्रमले सुदूरपश्चिमसम्मै निरन्तरता पाएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले अरु पार्टीलाई क्लिन स्वीप गरेको धनकुटामा यसपटक किल्ला तोडिएको छ । तानसेन नगरपालिकामा यसपटक एमाले बढारिने अवस्था बनेको छ ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा एमालेको विरासतलाई एकीकृत समाजवादीले तोड्दैछ । अघिल्लो निर्वाचनमा १२ हजार ९ सय १९ मतका साथ जितेको एमालेका मेयर रनबहादुर राईले नै यसचोटि एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट पूर्वमा पहिलो नगरपालिका जित्ने कीर्तिमान कायम गर्दैछन् ।
पूर्वको एकमात्र महानगर विराटनगरमा फेरि पनि एमाले पराजित हुँदैछ । दुई उपमहानगरमध्ये धरानमा एमाले दोस्रो स्थानका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । कहिल्यै पनि वामपन्थीले नहारेको धरानको इतिहासमै यसपटक एमालेप्रति विकर्षण बढ्दा त्यस्तो दुर्गती व्यहोर्नुपरेको हो ।
त्यहाँ मेयरमा सत्ता गठबन्धनतर्फका कांग्रेस उम्मेदवार अगाडि छन् भने उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अगाडि आएका छन् ।
अर्को उपमहानगर इटहरीमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले मेयरमा अग्रता लिएको छ । इटहरी पनि एमालेले जित्दै आएको पालिका हो ।
रौतहटको गौर नगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका शम्भु साहको अग्रताले त्यहाँ एमालेको सम्पूर्ण गुञ्जायस समाप्त भएको छ ।
०७४ को निर्वाचनमा साह एमालेबाट २९ सय ४९ मत ल्याएर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका थिए । यसपटक लोसपाका पुरानै प्रतिस्पर्धी अजय गुप्तालाई भारी मतान्तरका साथ जित्ने तरखर गर्दैछन् । त्यहाँको उपमेयरमा पनि एकीकृत समाजवादीका शैलकुमारी साह अगाडि छन् । वडा नं। १ मा एकीकृत समाजवादीका लालबाबु चौधरीले वडाध्यक्ष जितिसकेका छन् ।
बागमती प्रदेशको उपमहानगरमध्ये हेटौंडामा एमालेका मीनाकुमारी लामाको अग्रतासँगै एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । अहिले हेटौंडामा एमाले दोस्रो स्थानमा पुग्नका लागि संघर्ष गर्दै छ । मकवानपुरको एमाले गढ मानिने कैलाश र मनहरी गाउँपालिकामा एमालेले पराजय व्यहोरिसकेको छ ।
पोखरा महानगरमा मेयरका उम्मेदवार धनराज आचार्यको अग्रता बाक्लिँदै गएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका आचार्य मेयर र कांग्रेसका कोपिला रानाभाट उपमेयरमा अगाडि छन् ।
बुटवल उपमहानगरमा एमाले मात्रै साफ हुँदै छैन, नेताहरुले बोकेका स्थानीय कार्यकर्ताबीचमै मारामार चल्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको हठका कारण मेयरको उम्मेदवार बनाइएका बाबुराम भट्टराई प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानमा छन् ।
०७४ मा मेयर, उपमेयर जितेको उक्त उपमहानगरमा यसपटक एमाले निक्कै तल झर्नुका पछाडि व्यक्तिवादी कार्यशैली प्रमुख कारक रहेको स्थानीय एमालेहरू बताउँछन् ।
त्यहाँको वडा नं। २ मा एकीकृत समाजवादीका सुनिल शाक्य प्यानलसहित वडाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् ।
बुटवलमात्र नभई रुपन्देही जिल्लाभरिमै एमालेले पुरानो विरासत गुमाइसकेको छ । पाल्पा र गुल्मीमा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणामलाई एमालेले जोगाउन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिकामा एमालेले पुरानो विरासत गुमाइसकेको छ । एमालेले जितेका पालिकाहरूमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।
एमालेले विरासत गुमाइरहेको अर्को प्रदेश हो, सुदूरपश्चिम । एमाले सचिव लेखराज भट्टकै वडामा एमाले पराजित भएको छ । ०७४ मा माओवादीले जितेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १ मा अहिले कांग्रेसले जितेको छ । एमालेका उम्मेदवार भारी मतान्तरका साथ पराजित भए । पराजित हुने उम्मेदवार लेखराजका भतिजा हुन् । - दृष्टि न्यूज
चाइनामा नेपाली उडान अव सहज हुने
बिषादीमुक्त तरकारी, काठमाडौ बासीकालागि एक सापना (भिडियो सहित)
सजाए भोग्न तयार छु –मेनुका थापा,अध्यक्ष रक्षा नेपाल
सुवेदीलाई उछिन्दै रेणु ३११ मतले अगाडि
विद्यालयलाई डिजिटर शिक्षकको आवश्यकता